Olona tao Ankoalabe, Distrika Antalaha, nivarotra lavanila masaka milanja 08 kg no lasibatr’ireto mpisoloky roa lahy, ny 05 febroary 2020. Rehefa vita ny adivarotry ny roa tonta dia nilaza ireo mpividy fa entina haseho ny "patron" aloha ny lavanila.
Ny iray tamin’izy ireo nitondra ny lavanila 8kg, ny faharoa izay nitondra kitapo mihidy "cadenas" voalaza fa feno vola hividianana lavanila, nijanona niaraka tamin’ny tompon’ny entana teo.
Nanao sambo nilentika anefa ilay nilaza fa hampiseho ilay lavanila hovidiana tany amin’ny « patron » ; najanon’ilay nitondra kitapo mihidy "cadenas" teo amin’ilay nivarotra lavanila ny kitapo teny aminy dia iny koa izy no nanjavona.
Sanganehana ilay tompon’entana rehefa sasa-niandry, hany ka tapa-kevitra fa hisava ilay kitapo mihidy "cadenas" najanona teo aminy. Fonosana roa izay ravin-taratasy voatapatapaka natao miendrika vola 20 000 Ariary no tao anatiny.
Nanao fikarohana ny Zandary rehefa nahazo fanairana. Voasambotra tao Andampy ny iray tamin'ireo mpisoloky izay niaiky ny heloka vitany ary nanaiky ny hanoro ny misy ny namany sy ny entana.